မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၃)
မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၃)
Posted by aye.kk on Jun 18, 2012 in My Dear Diary | 10 comments
ဦး တ ယောက် သ င်္ဘော တက် သွား ခဲ့ ပါ သည် ….။
ရောက် တဲ့ အ ရပ် မှ နေ ၍ လည်း အစ် မ ကြီး ကျယ် အား ဦး က လွမ်း စာ များ ရေး သား လျှက် ပို ့ပေး နေ ခဲ့ ပါ သည် ….။
တစ် ခါ တစ် ခါ …..
လွန် စွာ လှ ပ သည့် လက် ရာ များ..
ပ လက် စ တစ် ကဒ် ဖြင့် ပြု လုပ် ထား သည့် ပို့စ ကဒ် များ ထည့် ပေး လာ တတ် ပါ သည်။
ပင် လယ် သ မု ဒ္ဒ ရာ ရေ ပြာ ပြာ နှင့် အ ဏ္ဏ ဝါ ရေ လှိုင်း ကြမ်း ကြမ်း ၊ မူး ဝေ အော့ အံ ခံ စား ရ သည့် ဝေ ဒ နာ များ ၊ ဖြူ သော အ သား အ ရေ တို ့မှာ ပင် လယ် ဆား ငံ ရေ , ပင် လယ် လေ တိုက် ခတ် ခံ ရ မှု များ ကြောင့် ညို မောင်း သွား ကြောင်း ၊ ပင် လယ် ပျော် သ င်္ဘော သား တို ့၏ ဘ ဝ ကား မိ ဘ ဇာ တိ မြေ ကို ပြန် ချင် လောက် သည့် စိတ် ဆ န္ဒ များ ပြော မ ပြ တတ် လောက် ပင် အောင် ခံ စား ရ ကြောင်း ၊ ဂျ ပန် ဆိပ် ကမ်း ကပ် စဉ် ၊ ပါး များ ပင် ကွဲ ထွက် မ တတ် ၊ ချမ်း အေး သည့် ဒဏ် ကို ခံ စား ခဲ့ ရ ကြောင်း ….
စုံ လင် စွာ ရေး သား ၍ ပေး ပို ့လာ တတ် ပါ သည်။
အစ် မ က ကြာ လာ သော အ ခါ ၊ စာ များ ကို ပင် ဖွင့် ဖောက် ၍ မ ဖတ် တော့ ပါ။ အပ် ကြောင်း ထပ် နေ သည့် စာ များ အား ငြီး ငွေ့သည် ဟု ဆို တတ် ပါ သည် ။
တစ် ခါ တစ် လေ,…………..
ဂျ ပန် မ လေး များ က လွန် စွာ လှ သည် ဟု စာ ထဲ တွင် ပါ လာ တတ် ပါ သည် ။ ရိ်ုး ရာ ဝတ် စုံ များ ချုပ် မ ဝတ် နိုင် သည့် ဂျ ပန် မိန်း က လေး များ သ နား စ ရာ ကောင်း ပုံ ပြော ပြ လာ တတ် ပါ သည် ။
အစ် မ ကြီး ကျယ် က ၊ သ င်္ဘော သား များ ဘ ဝ က ၊ နိုင် ငံ တ ကာ ဆိပ် ကမ်း များ ကပ် ရောက် ပါ က ကုန်း ပေါ် မ တက် လည် သည့် သင်္ဘော သား များ အ ဘယ် မှာ ရှိ မည် နည်း ။ အ ပြည့် အ ဝ မ ယုံ ကြည် နိုင် ပါ ဟု ပြော ဆို ပြီး ဦး က သူ့့ထက် အ ရပ် အ နည်း ငယ် နိမ့် သ ဖြင့် ကြည့် မ ရ ဟု ဆို ပါ သည် ။
ဦး ဆီ ကို စာ မ ပြန် ပဲ ပစ် ထား တတ် ပါ သည်။
ဦး က တော့ အ ရေး မ ပျက် ၊ အစ် မ ကြီး ကျယ် မ ဖတ် မှန်း သိ ပါ သည် ။ အ ဖေ့ ဆီ ကို တော့ စာ တွင် တွင် ရေး လာ တတ် ပါ သည်။
ဦး က သ င်္ဘော လိုက် တာ ၊ ကု မ္ပ ဏီ နှင့် စာ ချုပ် ချုပ် တာ ၊ အ နည်း ဆုံး (၂) နှစ် ၊ အ များ ဆုံး လေး နှစ် ခွဲ ကျော် ခန် ့ကြာ မြင့် မည် ဖြစ် ၍ ၊ စေ့ စပ် ကိ စ္စ အား ခိုင် မာ အောင် လုပ် ဆောင် ထား ပြီး ၊ အစ် မ ကြီး ကျယ် အား ထို အ ချိန် တွင် မိ မိ ကိုယ် ပိုင် ရှာ ဖွေ စု ဆောင်း ထား သော ငွေ ဖြင့် ၊ အင်း ယား လိတ် ( ဟို တယ် ) တွင် ခမ်း ခမ်း နား နား တင့် တင့် တယ် တယ် ဖြင့် လက် ထပ် မ င်္ဂ လာ ပွဲ ပြု လုပ် ပြီး ၊ ကောင်း မွန် သည့် ကိုယ် ပိုင် အိမ် ယာ နှင့် ထား ချင် ပါ သည် ဟု အ ဖေ့ အား စာ ရေး ပြော ကြား လာ ပါ သည်။
စေ့ စပ် ကိစ္စ အား နှုတ် ဂ တိ ဖြင့် သာ ၊ ပြော ကြား ထား လိုက် ရ သည့် အ တွက် ၊ လွန် စွာ စိတ် ထိ ခိုက် ခံ စား ရ ပါ ကြောင်း အ ဖေ့ အား စာ ဖြင် ့ရေး သား ခဲ့ သ ဖြင့် ၊ အ ဖေ မှ အစ် မ ကြီး ကျယ် အား လွန် စွာ စိတ် ဆိုး ၍ ခွင့် မ လွှတ် နိုင် အောင် ပင် ရှိ ပါ သည် ။ အစ် မ ကြီး ကျယ် က လည်း အ ဖေ့ ကို စ ကား မ ပြော ၊ ရင် မ ဆိုင် တော့ ပဲ တစ် လ တိ တိ နေ ပါ တော့ သည်။
မ ကြာ ပါ ချေ ။
ဦး သ င်္ဘော တစ် နှစ် ခွဲ မျှ ပင် မ ရှိ သေး ပါ ၊ အစ် မ ကြီး ကျယ် က သူ ကြိုက် သည့် သူ နှင့် လင် နောက် လိုက် ပြေး ပါ တော့ သည်။ အ မေ က လိုက် ပြေး ပြေး ချင်း သိ သည် နှင့် ဖုံး ဖိ ကာ တိုး တိုး တိတ် တိတ် နှင့် မ င်္ဂ လာ ဆွမ်း ကျွေး ပြု လုပ် ပေး လိုက် ပါ သည်။
အ ဖေ က တော့ မိ ဘ မျက် နှာ အိုး မဲ သုတ် သည် ။ သေ ခန်း အ ပြတ် ပဲ ဟု ဆို ပါ တော့ သည် ။
သ တင်း ကြား ကြား ခြင်း ၊ စာ ချုပ် ချုပ် ဆို ထား သည့် သ င်္ဘော ကု မ္ပ ဏီ မှ အ ပြီး အ ပိုင် အ လုပ် ထွက် စာ တင် ပြီး အ ဖေ့ ဆီ ပေါ က် ချ လာ ပါ သည်။
ဦး က သူ့မိ ဘ များ သည် လူ ကုံ ထံ အ သိုင်း ဝိုင်း က ဖြစ် နေ ၍ ၊ လွန် စွာ စိတ် ထိ ခိုက် မိ ပါ ကြောင်း ၊ နှစ် ဖက် ဆက် ဆံ မှု များ က အိုး ချမ်း ကွဲ လို ပြန် ဆက် နိုင် မှာ တော့ မ ဟုတ် ကြောင်း ၊ သူ နား လည် ပေး ပါ က လည်း ပီး ပြီး သား ကိစ္စ ကို သူ့မိ ဘ များ က မည် သည့် နည်း နဲ့မျှ ခွင့် လွှတ် ပေး မည် မထင် ပါ ကြောင်း ပြော ပြ ခဲ့ ပါ သည်။
ကျ မ လည်း ဦး အား မြင် တွေ့လျှင်………..
အိမ် ပေါ် ထပ် အ ထိ တက် သွား ပြီး …
စိတ် ထိ ခိုက် ကာ မ ခံ စား နိုင် တော့ ပဲ ချုံး ပွဲ ချ ငို ကြွေး နေ မိ ပါ သည် ။ ကိုယ် ပြော ကြား ထား သည့် စ ကား က ၊ အစ် မ ကြီး ကျယ် ကို အ ခြား သူ နှင့် မ ရ အောင် တား မည် ဟု အ ပြော ကြီး ထား မိ သည် ကို လည်း များ စွာ အ ရှက် ရ သွား ခဲ့ မိ ပါ သည်။
ဦး က လည်း …………….
ကျ မ ရှိ သည့် နေ ရာ အိမ် ပေါ် ထပ် သို ့လိုက် တက် လာ ပြီး ၊ ချုံး ပွဲ ချ ခါ ရှိုက် ကြီး တ ငင် ငင် နှင့် ငို နေ သည့် ကျ မ အား ချော့ မော့ ပါ တော့ သည် ။ အစ် မ ကြီး ကျယ် မှ လည်း သူ့ဆီ ဘယ် တော့ မှ ပြန် လာ မှာ မ ဟုတ် တော့ ကြောင်း ….
ဦး လည်း နိုင် ငံ ခြား မှာ ပဲ အ လုပ် ရှာ ကာ ၊ အ ပြီး အ ပိုင် တိုင် နေ ထိုင် သွား တော့ မည် ဖြစ် ကြောင်း ၊ ကျ မ အား ပြော ပြ ပါ သည်။
သ င်္ဘော ပြန် တက် ဖို ့ဆို လျှင်…
စာ ချုပ် သက် တမ်း မ ပြည့် ပဲ နှင့် ထွက် ခဲ့ ရ သည့် အ တွက် ၊ သ င်္ဘော အ လုပ် အ ကိုင် ပြန် လျှောက် ထား ဖို့က လွယ် ကူ မှာ မ ဟုတ် သည့် အ ပြင် လွန် စွာ ခက် ခဲ သွား ပြီ ဖြစ် ၍ အ ချိန် ပြန် ယူ ပြီး မှ သာ ပြန် လုပ် ၍ ရ မည် ဖြစ် ကြောင်း အ ဖေ နှင့်အ မေ့ အား ရှင်း ပြ ပြော ဆို နေ သည် ကို လည်း ကျ မ မှ ကြား သိ ထား ပြီး ဖြစ် နေ ခဲ့ ပါ သည်။
အစ် မ ကြီး ကျယ် လက် ထပ်သွား သည် ကို ဟုတ် မ ဟုတ် ကိုယ် တိုင် သိ ရ မှ ဖြစ် မည် ဆို သည့် စိတ် နှင့် ပြန် လာ ခဲ့ မိ ခြင်း ဖြစ် သည် ကို အ ဖေ နှင့် အမေ အား ပြော ဆို ခဲ့ သည် ကို ကျ မ အား ပြော ပြ ခဲ့ ပါ သည် ။
သူ့အ မေ က သူ့အား လွန် စွာ သိတ် ချစ် သည်။
ဂုဏ် သိ က္ခာ အ တွက် လည်း ပြန် ၍ အ ဖတ် ဆည် မ ရ နိုင် ကြောင်း ၊ အ မေ စိတ် ထိ ခိုက် ခံ စား မှု ကို လည်း မ မြင် မ တွေ့လို ကြောင်း အ စ ရှိ သည် တို့အား ပြော ဆို ရှင်း ပြ သ ဖြင့် ၊ ကျ မ မှ လည်း ခံ စား ရ ကာ ပို ငို နေ မိ ပါ တော့ သည် ။
နောက် ဆုံး ၌ ကျ မ အား…
အ ငို တိတ် အောင် ချော့ ပြီး ၊ သ္မီး ငို နေ လျှင် ဦး လည်း ပို စိတ် ဆင်း ရဲ ရ သည်။
မ ပြန် ၍ ဘယ် လို ဖြစ် မ လည်း ၊ သ္မီး အ ငို တိတ် မှ ဦး လည်း ပြန် ၍ ရ နိုင် မည် ဟု ပြော ဆို ပါ တော့ သည်။ သ္မီး ဦး မျက် နှာ ကို သေ သေ ချာ ချာ ကြည့် စမ်း ပါ ဦး ဟု ပြော ခါ ကျွန်း သား ကု လား ထိုင် တွင် ထိုင် လျှက် က အောက် မှာ ထိုင် နေ သော ကျ မ အား…
သူ့လက် ဖြင့် အ သာ အ ယာ ဆွဲ ယူ ပင့် ၍ ခေါင်း က လေး မော့ ပြီး ကြည့် ခိုင်း ပါ တော့ သည် ။
ကျ မ မှ အ ငို မ တိတ် သ ဖြင့် လည်း ဦး က ကျ မ မျက် နှာ လေး အား စေ့ စေ့ ကြည့် ကာ သ္မီး က ပို ချော လာ သည် ဟု ပြော ဆို ပြီး ငို နေ ပါ က ရုပ် ဆိုး သည် ၊ အ ကျည်း တန် သည် မ လှ ဟု …..ဆို ကာ ပြော ပါ သည်။
မ တွေ ့ရ တာ ကြာ ပြီ ၊ တ နှစ် ခွဲ မှာ သ္မီး က တ အား ထွား လာ ပြီး ပို ချော လာ သည် ။ သ္မီး က ကြီး လေ
ချော လေ ဒေါင်း မျိုး ပဲ ဟု ဆို ကာ ပြော လျှက် ….
စိတ် မ ပြေ ပြေ သွား အောင် ပြော ဆို ပြီး ချော့ ပါ တော့ သည်။
ငို လွန်း ခါ ချွေး များ နှင့် ရွှဲ နစ် နေ သည့် ကျ မ အား ….
ဦး က …….
ကျွန်း ကု လား ထိုင် ခုံ မှ ထ လျှက် က ၊ မျက် နှာ သုတ် တ ဘက် တစ် ထည် အား တောင်း ယူ ပြီး သုတ် ပေး ခဲ့ ပါ သည်။
မျက် လုံး များ လည်း မို ့အစ် နေ သ ဖြင့် ပေါက် ထွက် တော့ မည် မ ငို နဲ ့တော့ ဟု ပြော ပါ သည် …
ပြီး လျှင် ကျ မ အား …
သ္မီး ကြီး လာ လျှင် ဦး ပြန် လာ မည် ဟု ဂ တိ ပေး သည် …
ငို တာ မ ကောင်း ဘူး…..
ကြီး လာ လျှင် ဦး ကို ယူ မှာ မ ဟုတ် လား….
သ္မီး စ ကား ကို ဦး က မှတ် ထား သည် ဟု ပြော ဆို ကာ….
အ ဖေ နှင့် သီး သန့် တွေ့ပြီး ၊ အ ရေး ကြီး သည့် စ ကား အ ချို ့များ အား မှာ ကြား ပြော ဆို ခဲ့ ပြီး မှ သာ ဦး က ပြန် သွား ခဲ့ ပါ တော့ သည်။။
ဦးဖြစ်ချင်တဲ့ လူတွေ မှတ်ပလား.. အခုတော့ နောက်လူနဲ့ ညားသွားရှာပြီ။
တီတီအေးရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပေါ့လေ… ကောင်းခန်းရောက်တော့မယ် မြန်မြန် ဆက်ရေးပါဗျို့..
အာ…….. အန်တီနော် … တစ်ရက်ထပ်စောင့်ရတော့မယ် … အပိုင်းလေးကို ဖတ်ဖို့ … ။
သိချင်စိတ် အရမ်းဖြစ်အောင် …. စာရေးနိုင်တဲ့အတွက် ချီးကျူးပါတယ် … ။
ဟိုဘက်ပို့စ်မှာတောင်ရေးခဲ့သေးတယ် … မိဘရဲ့ ဆန္ဒကို မငြင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း .. ဒီဘက်ပို့စ်လည်း ရောက်ရော …. ယောကျာ်းနောက်လိုက်ပြေးပြီး .. အတိလင်း ငြင်းဆန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဖတ်ရတော့ ……… ဩ ……. အနိစ္စ …
အန်တီအေးရေ………. အပိုင်း(၄) ကို မြန်မြန်လေးဆက်ပေးပါဦးနော်။ ဒီမှာသိချင်နေလို့ပါ။ ဦးက အရေးကြီးတာတွေမှာပြီး ထွက်သွားတာဆိုတော့ ပြန်လာရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲလို့ စောင့်မျှော်နေကြောင်းပါ……. အန်တီအေးကိုလည်း
အရမ်းချီးကျူးပါတယ်။ မြင်ကွင်းတွေကို ပေါ်အောင်ရေးသားနိုင်လို့ပါ။
ဦးပေတို့ အရွယ်ကြိုက်ပေါ့နော်…. ဒါမျိုးများဖြစ်လို့ကတော့ ..ယူလိုက်ကြစမ်းဘာ။ နောက်ထပ်အငယ်လေး ကျန်နေတာကိုး နော အူးပေ။
အခု မှ ပေါင်းဖတ်ပြီး မှတ်ချက် ပေးလိုက်ပါတယ်။
ချစ်တိုင်းလဲ မညား ဇာတ်လမ်း ဖြစ်ခဲ့တာများလား။
တစ်ဖက်သတ် အချစ် ဟာ အတော်ကြောက်စရာကောင်းပါ၏။
အဲဒီ ဦး ခမျာ အစ်မလဲ မရ၊ ညီမ လဲ မရ ဖြစ်ခဲ့တယ်ထင်တယ်။
ရှေ့ဇာတ်လမ်း ကို မျှော်နေပါတယ်။
အပိုင်းလေးကို စောင့်ဖတ်နေပါတယ် အန်တီအေးရေ ..
နောက်ပိုင်း ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဟင် ….